Subject: Aaaway Mustaqbalkayga? Tue Mar 02, 2010 8:50 am
AAWAY MUSTAQBALKEYGA!?- 06 Jul 2009
Inkastoo aanan qoraa ahayen hadana qoridda maqaalkaan waxaa igu dhaliyay kadib markii aan arkay xaalada ka taagan jamhuuriyada islaamiga ah ee iiraan oo maalmahan qabsatay canaawiinta hore ee saxaafadda caalamka natiijada doorashooyinkii dhacay 12/June/2009 oo ay qaadaceen taageerayaasha Mr. Mir Hossien Mousavi iyagoo isagu soo baxay dibadbaxyo gilgilay magaalada Tahraan.
Taageerayaasha oo luluyay boorar kala duwan ayaa waxaa dareynkeyga soo jiitay boor ay wadatay gabadh reer iiraan ah oo lagu soo qoray "WHERE IS MY VOTE?" oo lamicna ah -away codkeyga?- hadaba waxaa oodin igunoqotay dhamaan qalalaasahaas dhacaya, dhiigaas qubanaya iyo rabshadahaas dhaliyay inay ku geeriyodaan kudhawaad 20 qof, dhaawac tiro aan la xaqiijin iyo xabsi u taxaabidda dhowr iyo 30 wariye kaliya inay u dhacayaan cod la lunsaday, sidaa darteed aniga ka arday Soomaali qurbo joog ah waxaan is waydiiyay " Aaway mustaqbalkayga?"
Kadib labaatan sano oo oo burbur, dagaalo sokeeye, barakac baahsan, bililiqo, boob baahi iyo diif isagu jira waxaan weli noo muqan ififaalo nabadeed oo muujinaya inay Soomaali dhibaatada uga bixi doonto sanadaha dhaw ee soo aadan.
Waxaan ku soo dhex barbaaray kuna garaadsaday dowlad la'aan, dal aan kala danbeyn laga aqoon iyo daryanka rasaasta walow ay maalin walba qisadeeda wadatay haddana waxaa la inoo qabtay tiro shirar dib u heshiisiin da'dayda ku dhaw oo lagu baadi goobayo soo celinta qarankii Soomaaliyeed iyo dhismaha dowlad loo dhanyahay, waxaana ugu cadcadaa shirarkii dib u heshiisiinta ee Soodare, Rome, Carta iyo Embagaati oo aysan ka soo bixin natiijo la taaban karo kaliyana ay ahaayeen safaro dalxiis ah oo lagu soo saaro ruwaayado lagu madadaaliyo umadda dhibaataysan ee marwaliba ku hanweyn in uu noqdo kii ay Soomaali isku raaci lahayd, ugana bixi lahayd aafada ku habsatay waxaase ka dhashay hogaamiyayaal dhanka xumaanta u badiyay oo aan wanaag la soo xigto lahayn.
Waxaa fursadii ugu weynayd ay soo bidhaantay markii madaxweynaha Sudan Omer Al-bashir uu gebagebadii sanaddii 2006-da isagu yeeray kulanlagu dhamaynayo khilaafaadkii u dhexeeyay dowladii Embagaati iyo Midowga maxaakiimta oo ahaa labadii awood ee hogaanka dalka ku loolamaysay balse lagu guuldareystay, iyadoo eersanaysa isla qabweynaan, aqoon dari iyo u adeegida dano shisheeyewaxaana ka dhashay dhibaatooyin xaalada dalka sii murjiyay sida soo gelitaanka ciidamada Itoobiya iyo soo if-bixida garab cusub oo aan midnimada Soomaaliya dan ka lahayn.
Kadib Labaatan sano oo macluul aan ka soo rayn lahayn dhalinyaradii laga sugayay inay noqdaan hogaanka dalka berrito waxay doorbideen inay ku haftaan biyaha badaha caalamka iyagoo raadinaya nolol ka wanaagsan midda ay ku soo barbaareen iyo inay wax ka caymiyaan nolosha gudcurka ah ee qaadatay ugu yaraan saddex meelood meel cimrigooda, waxaana ka mid ah su'aalaha ka mid noqday nolol maalmeedka soomaalida qurbo joogta ah; Haddii aysan jirin khilaafaad diin iyo isir ah maxaad isku dagaalaysaan !? Fasaxan dalkaaga miyaad ku laabanaysaa? garabyada dalkiina ku dagaalamaya kee baad taageertaa? kaba sii darane waxaa i bahdilay iguna kalifay inaan wejiga ka dadbado islamarkaana aan ka meermeero la sheekeysiga dhalinyarada da'dayda ah ee u dhashay dalalka ay soomaalida rajo ku noolka ku joogto sida Kenya iyo Ethiopia oo ay faan ka noqotay inay ka sheekeeyaan xaalada argagaxa leh ee gabdhaheena meesha ku haysata -Subxaanal Laah-
Hubanti da'yar kasta oo Soomaali ah waxaa maanta maankiisa ku taagan; Nus qarniga soo socda malaga yaabaa in la arko dowlad soomaaliyeed oo sharafteena soo celisa? goorma ayay dhici doontaa in lagu kala garqaato saldhiga boolis ee ugu dhaw? haddiise ay dhici weydo dalkee ayaad degtaa? kee baad marti u noqotaa oo aad Passport- ka qaadataa? ma xaalka oo sidan ah ayaad dhiman doontaa? carruurtaaduna ku weyn doonaan isirkooda Soomaalinimo? waxaan ku kalsoonahay inay jiraan shakhsiyaad karti u leh inay Soomaaliya u horseedaan iftiin iyo baraare balse waxaa la yiri: "Fiqi tolkiis kama jano tagee" aysan awood u lahaan karayn inay iska caabbiyaan xumaanta dadka wada ekeysay ee danta shakhsi iyo midda beesha ay liiska ugu horeeyaan.
Waxay ila tahay inaan la filayn in xaalada Soomaaliya ka soo rayso inta ay majaraha u hayaan qabqablayaasha dagaal, ururada diinta islaamka ku soo gambanaya ee aan fursada u helin inay iska dhex arkaan siyaasada Soomaaliya muddo dheer iyo dowlada qaabka qabiil lagu soo dhisayee taagta daran una muuqata inta waqtigeeda ka dhiman in ay gudaha dhismaha madaxtooyada Villa Soomaaliya socod barad ugu dhamaysan doonto iyo sida caadada ah qaylo dhaan gargaar degdeg ah iyo safaro.
Si kastaba waa ay taagnaan doontaa rajadeena inta ay berrito jirto qoraxdana ay bari ka soo baxayso, hamigeena ma dhiman doono inta uu jiro shakhsi Soomaali ah oo xaqa u hiiliya horumarna noo horseedi karaaya, ma lahan sabab aan ku quusano inagoo Islaam ah, Alle-na uu gargaaraheena yahay waxaase igu taagan oo farxadayda la tagtay in maalin walba oo hor leh ay shalay dhaanto maadaama warka ugu horeeya ee ay indhahayga qaban doonaan uu yahay tiro dhaawac iyo dhimasho ah iyo dagaalo hor leh.. !!!
Waxaa mar walba muhiim ah inaan maareyno maalinta aan joogno berrina aan sugano, innagase waa inoo simantahay oo wax inoo kala saara ma leh inta ay dhagaheenu maqlayaan magacyada dagaal oogayaasha mustaqbalkeena lunsaday nagana hor istaagay inaan dunida la la jaanqaadno, burburka iyo baahida dalkeena ekeeyayna u bedelno barwaaqo sooran iyo meel loo soo dalxiis tago, safarkuna daalkiisa ku ilaawo, balse runtii waa ay iman doontaa maalin aan u dareerno sanaadiiqda doorashada oo aan ku doodno hufnaanta doorashada oo ay maxkamada sare go'aan ka gaarto... Nimco la arki doonee !
W/Q:cabdi naasir maxamed axmed zero
Tafatire:. abdi hafid abdi salan ibraahim
Subject: Re: Aaaway Mustaqbalkayga? Wed Mar 03, 2010 6:31 am
walaahi sxb maqaalka waa maqaal cajiib ah inkastoo maqaalkaan aad dad ku aflagaadaysay waxaan kaa codsaneenaa aflagaadada inaad joojisida adigoo raali ah sxb laakin maqaalka ayaa waxaa ku bilawday aaway mustaqbalkayga???
walaahi hadaaan isku dayo suaashaada jawaabteeda mustaqbalkeena wuxuu ku jiraa inaan qaado shareecada islaamka aana iska dayno daba dhilif inaan u noqo gaalada taas waa iiga rayi mahad sanid salaamu claykum